Indabuko Yakho » Author » Bongani Kholo Khumalo
In M, Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on August 26, 2017 / No Comments
AbakwaModise Isibongo sakwaModise saqambeka ngoModise indodana ka Kata ka Sefiri (Marikgwe) ka Ntsikwe ka Mare(Patsa) kaTlopo. Lesi sizwe sakwaModise singabaFokeng bakaPatsa.Phela abaFokeng bahlukaniswe kabili, kukhona abakaPatsa kanye nabakaMmutla. Indabuko yabeSuthu iyefana neyabeNguni, isenhlanezwe lena koSudan. Lena eSudan abeSuthu kanye nabeNguni basuswa izibhamu zamaGreeki kanye nezamaArabhu. Kuthiwa isizwe sabaFokeng yisona sizwe esikhulu kunazo zonke izizwe zabeSuthu futhi yisona esafika kuqala kuleli leNgabade(Manzansi-Afrika) ngenkathi kusukwa enhla nezwe. Iqhawe elagqama kakhulu k... qhubeka ufunde »
In N, Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on August 8, 2017 / 1 Comment
AbakwaNzimakwe Abantu bakwaNzimakwe bangabeSuthu ngokwendabuko. Ukhokho walaba bantu bakwaNzimakwe kwakunguMachi igama lakhe, lendoda yayiphila kudala kakhulu kanti ibuye ibe ukhokho wabantu bakwaXolo,Dlezi,Phehlukwayo, Machi, Ngutshana, Sabela nabanye. Laba bantu bakwaNzimakwe babuye baziwe‎ ngok... qhubeka ufunde »
In Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on August 8, 2017 / No Comments
AbakwaMdleleni Mbulazi Mntungwa Khumalo Mkhatshwa Zikode Mashobana Mdleleni Abantu bakwaMdleleni bangaMantungwa,baphuma kubantu bakwaKhumalo. UMdleleni okwaqanjwa ngaye isibongo wabe engumfowabo Mzilikazi, eyindodana kaMashobana njengabo oNzeni, oMzilikazi, oNgonyama oGquqgu nabanye. Imizi kaMashoba... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on August 8, 2017 / 1 Comment
AbakwaMasuku Abantu bakwaMasuku kusengabantu bakwaNdwandwe. Abantu bakwaNdwandwe badabuka ngasezintabeni amaGudu.Lezi yizintatshana ezengamele umfula uPhongolo.Ngakho-ke kusashiwo uma kukhulekwa kwaNdwandwe,kwaNxumalo kumbe kwaMasuku kuthiwe ”Ndwandwe waseGudu”noma kuthiwe nina base̵... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on August 8, 2017 / No Comments
AbakwaHlanyane /Mphuthi Abantu bakwa Hlanyane bangabaNguni baseMbo ngokwendabuko ize namuhla sibathola sebekhuluma ulimi lwesiSuthu. Laba bantu ngesikhathi soMfecane (sezimpi zaseMazansi neAfrika ezaqalwa amakhosi afana nawoDingiswayo, oPhungashe,oHinsa , oZwide, oMacingwane, oMjokwane namanye. Inhl... qhubeka ufunde »
In M, Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on July 5, 2017 / No Comments
AbakwaMtirara ‎ Nina bakaNdaba ngiyameba ngimuke naye, ngimbuke kuze kwehle izinyembezi kube sengathi ngibuka isihlahla somdlebe! Enhla nasezansi ngiyabingelela egameni lomlando wakithi kwaMalandela. Namuhla sizobheka isibongo sakwaMtirara. Laba bantu bakwaMtirara bangaBathembu ... qhubeka ufunde »
In K / by Bongani Kholo Khumalo / on July 5, 2017 / 2 Comments
AbakwaKhonjwayo Abantu bakwaKhonjwayo bangaMampondo ngokwendabuko, nabo baphuma kuSibiside waseMbo. USibiside wazala uNjanya owazala amawele oMpondo noMpondomise. UMpondo wazala isizwe saMampondo, kwathi uMpondomise yena wazala aMampondomise. KuMampondo kwabuye kwaphuma ezinye futhi izizwe ezifana b... qhubeka ufunde »
In N / by Bongani Kholo Khumalo / on July 5, 2017 / 2 Comments
AbakwaNdamase. Abantu bakwaNdamase bangaMampondo,isibongo sabo saqambeka ngoNdamase owayezalwa yiNkosi yaMampondo iNkosi uFaku(UFaku ofakayo ungathi uyifakile kanti uyikade eboyeni) .INkosi uFaku yayizalwa inkosi uNgqungqushe kaNyawuza, wabe engumzukulu wenkosi uSibiside yaseMbo. UNdamase wayezalwa ... qhubeka ufunde »
In M / by Bongani Kholo Khumalo / on July 5, 2017 / No Comments
AbakwaMabunda. Isibongo sakwaMabunda savela ngoMabunda wakwaMazibuko owayeluqhamukise ngaseSt Lucia Bay lapho isizwe sakwaMazibuko sasizinze khona ngaleso sikhathi. Abantu bakwaMazibuko baphuma kuMangweni ingakho bebuye baziwe ngokuthi bangabantu baseMangweni noma bangaMangwe. Bakanye nabakwaZ... qhubeka ufunde »
In Umlando ngezibongo / by Bongani Kholo Khumalo / on July 4, 2017 / No Comments
AbakwaMokebe Abantu bakwaMokebe bangabeSuthu abaziwa ngokuthi ngaBafokeng baka Mmutla( Bafokeng baMmutla). Isibongo sakwaMokebe saqambeka ngoMokebe wayephila eminyakeni yama 1600 ngesikhathi samakhosi oMageba waseMakheni kanye noPhunga waseBulawini. AbaFokeng bahlukaniswe izigatshana eziningan... qhubeka ufunde »